Izwekazi elikhulu kakhulu emhlabeni jikelele i-Eurasia
Izwe liyingxenye yesithathu yendawo yonke yomhlaba wethu. Ubuso bomhlaba buhlukaniswe yizilwandle zibe amazwekazi. Izwekazi elikhulu kunawo wonke emhlabeni liyi-Eurasia. Kukhona amazwekazi atholakale kuphela endaweni eyodwa, isibonelo, i-Antarctica, i-Australia, iNyakatho neNingizimu Melika. Amazwekazi anjengo-Afrika ne-Eurasia akhona kuzo zonke iziqu zomhlaba. Khumbula ukuthi i- hemisphere yomhlaba osempumalanga nentshonalanga yeMhlaba ihlukanisa i- zero meridian, nomngcele ophakathi kwemiphakathi yaseningizimu neyakathoma eduze kwe-zero parallel (i-equator).
Esikhathini esedlule, cishe ingxenye yesigamu yezinkulungwane zezigidi edlule, kwakukhona izwekazi elilodwa eMhlabeni - iPangea. Ngenxa yezinqubo ezingapheli iPangea ihlukaniswe eLaurasia naseGondwana. Ngisho nangemva kwalokho, ukuhlukaniswa kokugcina komhlaba kuze kube yizizwekazi zanamuhla kwenzeka. Ososayensi bakholelwa ukuthi ushintsho olunjalo lomhlaba - hhayi olugcina. Ngokwezibalo zongcweti, izikhukhula eziqhubekayo ezindaweni eziningi zomhlaba kanye nokuphakama okuncane kwendawo yasolwandle kungase kwenzeke.
I-Eurasia - izwekazi elikhulu kakhulu
Insimu yezwekazi inamaphesenti angama-36 ebusweni bonke bomhlaba, ithulwe ngamamitha angu-16 000 ukusuka empumalanga kuya entshonalanga kanye no-8 000 km ukusuka eningizimu kuya enyakatho. Emaphandleni kunamazwe angaba ngu-100. Izwekazi elikhulu emhlabeni wonke lihlanganisa i-Asia neYurophu. Umkhawulo wokuhlukanisa phakathi kwabo ngokwemvelo udlula ezintabeni zase-Ural. Izwekazi eliseduze ne- Eurasia yi-Afrika.
"Okungaphezulu" - hhayi kuphela endaweni
Ukuphendula umbuzo mayelana nezwekazi elikhulu kunazo zonke emhlabeni, kufanele kuqashelwe ukuthi hhayi kuphela ubukhulu be-Eurasia buvelele.
Kulapha ukuthi uhlelo oluphakeme kakhulu lwezintaba lukhona, iTibet, lapho indawo ephakeme kunazo zonke emhlabeni - Everest (Jomolungma).
Izwe elisezingeni eliphezulu likhona kuzo zonke izinkomba zezulu kanye namabhande. Eurasia kukhona isibalo sokushisa okuphelele kwengxenye esenyakatho yoMhlaba - yi-Oimyakon.
Nansi echibi elijulile emhlabeni wonke - uLwandle iBaikal. I-Eurasia inesiqephu esikhulu kunazo zonke emhlabeni - i-Arabian.
Izwekazi elikhulu kunazo zonke eMhlabeni ligezwa ngamanzi azo zonke izilwandle. I-Eurasia emingceleni yayo enyakatho ine-shelf enkulu kunazo zonke yolwandle.
Amazwe amaningi kunazo zonke emhlabeni, njengeNdiya neChina, asele zwekazi.
Izwekazi elikhulu kunawo wonke emhlabeni linemisebenzi eminingi. Indawo yezwekazi kuzo zonke izindawo zemvelo inikeza izinhlobo ezihlukahlukene zezitshalo nezilwane. Insimu enkulu ikhuthaza ukuhlukahluka kwezinhlobo zenhlabathi kanye nokutholakala kwemithombo ye-hydro yezizinda zasemhlabeni nasemhlabeni. I-pantry yamaminerali e-Eurasia imelwe cishe yizo zonke izakhi zamakhemikhali ezifakwe etafuleni lezinsuku. Amazwe asezindaweni ezisemaphandleni anemingcele eseduze, eyenza ukusebenzisana kwezomnotho phakathi kwabo kube lula. Inani elikhulu labantu nezizwe ezihlala ensimini enkulu kangaka kubanika ithuba lokushintshanisa amagugu namasiko omlando. Kuhle futhi okubaluleke kakhulu - kungumhlaba wethu, lapha izwe lethu, izwe lakithi, ngenxa yokuthi zonke izinto zethu zokuphila zizofezwa.
Izici eziyinhloko zolimi lokubhala
Uhlobo luni lomuntu ongabizwa ngokuthi umuntu? Kuyini ubuntu?
Ukuhlaziywa kwenkondlo ethi "The Village" ngu-Alexander Pushkin
Indlela ukuhlanza igolide ekhaya
A. S. Pushkin, "iNkosikazi ku Maid": Isifinyezo imisebenzi
Amakilabhu best, uPetru - lokhu drive kanye nemizwelo!
Indlela yokuhlaziya inzuzo nokuzuza kwebhizinisi?
Dali (Ukuzwakala komculo): izici onobuhle engcono kanye nokubuyekeza
Car Alarm Pandora DXL 3000: incazelo, imiyalelo, ukubuyekezwa
Utshwala Ukucindezeleka: Izimpawu, Izimbangela